न छोराछोरी न कोहि ! एक्ली आमा एक्लै बाटोमा भौतारिदै - ABNews Nepal
न छोराछोरी न कोहि ! एक्ली आमा एक्लै बाटोमा भौतारिदै
Mar 7, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, chitwan news, dhamala ko hamala, ganga lama, headline nepal, katathmandu news, nepal update, taja khabar nepal, tajakhabar
बुढी आमा डल्लि आमा जो पछाडि झोला बोकि चप्पल लगाएर हिंड्छिन। चप्पल पनि पुरै च्यतिएको मोजा पनि सबै च्यात्तिएको लगाएर हिंड्नी रहिछन। लाठिको भरमा हिड्ने साथै आदि सन्चो आदि असन्चो छु भन्दै आफ्नो कुरा सुनाउछिन।
क ठै बरा !! हात समेत मुठी नपर्ने यो के आइ लाग्यो।खाना आफू पकाउन पनि नसक्ने , अनि भोक लाग्यो भने पनि नातिनी कै भर पर्नु पर्ने कुरा पनि सुनाउछिन।
रासन पानी पनि नभएको कुरा सुनाउदै भक्कानिन्छिन । खाना खाने4जाना छौ खाना को लागि समस्या पनि भै रहेको सुनाउछिन। आफू हिंड्न् पनि नसक्ने त्यही साना नानिको भर पर्न पर्ने सुनाउछिन।
हेर्नुस भिडियो :- https://youtu.be/DL0q1WfxpJg
काठमाडौ । तनहुँ सदरमुकाम दमौलीको निकै ब्यस्त बजारमा लागेको आ गो नियन्त्रणमा आएको छ । आइतवार विहान लागेको ३ घण्टा पनि नियन्त्रणमा आएको छ । आ गो निभाउन काठमाडौंबाट लगिएको हेलिकप्टरले आकाशबाट पानी खन्याएको थियो।
तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालका अनुसार दमौली बजारको भोर्लेटार चोकस्थित भुपाल हार्डवेयर र ज्योति हार्डवेयरमा लागेको आ गो निभाउन पोखरबाट चारवटा र लमजुङबाट एउटा दमकल ल्याइएको थियो। स्थानीय सेना, प्रहरी र वारुण यन्त्रले पनि निभाउन नसकिएपछि काठमाडौंबाट सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर र दुई छिमेकी जिल्लाबाट दमकल ल्याइएको थियो।
आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण आइसकेको छैन। आ गो निभाउन स्थानीय बजारका ट्यांकर पनि प्रयोग गरिएको थियो। क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको अर्यालले बताएका छन्। निकै ब्यस्त र घना वस्तीमा आगलागी भएका कारण स्थानिय निकै त्र सित भएका थिए । काठमाडौवाट हेलिकप्टर मगाइएको थियो भने स्काभेटरले जोडिएका घरहरु भत्काएको थियो ।
उर्जामन्त्री हरिशरण गाडी दुर्घटना